के छ विवादित एमसीसी सम्झौतामा ? पढ्नुहोस् सम्झौताकाे पूर्णपाठ | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more के छ विवादित एमसीसी सम्झौतामा ? पढ्नुहोस् सम्झौताकाे पूर्णपाठ
काठमाडौं । नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलेनीयम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी)बीच भएको सम्झौता अहिले निकै विवादमा परेको छ । झण्डै ६० अर्ब बराबरको अनुदान सहयोग सम्झौता, सम्झौतामा भएका प्रावधानहरुको कारण विवादमा परेको हो ।
केहि गम्भिर प्रकृतिका प्रावधानकै कारण झण्डै ७ महिनादेखि एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा रोकिएको छ । मुख्यतः सत्तारुढ दल नेकपाभित्र सम्झौताबारे गम्भिर संशय र विवाद सिर्जना भएको छ ।
सम्झौताको अनुसूची ५ मा भएका प्रावधानप्रति नेपालमा गम्भिर सशंय देखिएको छ । सम्झौतामा लागू हुनका लागि अतिरिक्त पूर्व शर्तहरुको रुपमा भारत सरकारको समर्थन लिने र संघीय संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुरा उल्लेख छ ।
साथै एमसीसी अमेरिकाको सैन्य रणनीति इण्डो–प्यासिफिक एलाइन्सअन्तर्गत भएको पुष्टि भएसँगै पनि विवादमा परेको हो । सम्झौताको विरोध भईरहँदा कतिपयले नेपालमा सैन्य शक्ति भित्र्याउने अमेरिकाको दाउ भन्ने पनि टिप्पणी गरेका छन् ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आफ्नो अमेरिका भ्रमणको समयमा २०७५ भदौ २९ गते एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यस्तो छ एमसीसी सम्झौता
माघ ३ गते, २०७६ - १३:३५ मा प्रकाशित